DAAWO SAWIRRO: Faah-faahin iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamadii Talyaaniga ee lagu qarxiyay Muqdisho | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO SAWIRRO: Faah-faahin iyo wararkii ugu dambeeyay ciidamadii Talyaaniga ee lagu qarxiyay...
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxay faah faahin ka soo baxeysaa khasaaraha ka dhashay weerar maanta lagu qaaday kolonyo ay la socdeen Ciidamada Militariga Talyaaniga, xilli ay marayeen Wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi uu burbur ka soo gaaray mid ka mid ah kolonyadii ay la socdeen Militariga Talyaaniga.
Goobjoogeyaal ayaa mareegta Halqaran.com u sheegay in qaraxaasi uu sababay dhimashada laba qof oo rayid ah iyo dhaawaca laba kale, sidoo kalena uu jiro burbur uu soo gaarsiiyay goobo ganacsi oo halkaasi ku yaala.
Sidoo kale, wasaaradda difaaca Talyaaniga ayaa xaqiijisay in la weeraray kolonyo ay leeyihiin Militariga Talyaaniga ee ku sugan Magaalada Muqdisho, waxayna sheegtay inaanu jirin wax khasaaro ah oo weerarkaasi ka soo gaaray ciidamadooda.
Si kastaba waxay aheyd, bishii October ee sanadkii hore markii Wadada Warshadaha lagu weeraray kolonyo ay la socdeen Militariga Talyaaniga, oo qayb ka ah hawlgalka Midowga Yurub ee lagu tababaro Ciidamada Dowladda Somaliya.
Ciidamo Talyaani oo lagu qarxiyay Muqdisho